को हुन् रवि ओड ? अछामदेखि कञ्चनपुर, दोहोरी साँझदेखि नेपाल आइडलसम्म — OnlineDabali
Posted on December 21, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेपाल आइडल–२ को उपाधि रवि ओडले जितेका छन् । शुक्रबार भएको फाइनलमा तीन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ओडले उपाधि हात मार्न सफल भएका हुन् ।
गरिब अझ सुकुम्बासी परिवारमा हुर्केका ओडले रु २२ लाख, कार र गोल्डेन ट्रफी पाएका छन् । त्यसैगरी आइडलको फस्र्ट रनरअप कास्कीका विक्रम बराल भए । उनले रु २० लाख पुस्कार पाए । सेकेण्ड रनरअप प्रदेश नं १, झापाका सुमित पाठकलेरु १२ लाख पुरस्कार प्राप्त गरे । त्यस्तै प्रतियोगिताको थर्ड रनरअप झापाकी अस्मिता अधिकारी भइन् । उनले स्कुटर पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।
को हुन् रवि ?
कञ्चनपुरको गुलरियामा जन्मेका रविका आमाबुबा अछामको बुढाकोटबाट बसाई सरेका थिए । अछाममा जिविकोपार्जनमा समस्या भएपछि रविका बुबा राजेन्द्र र हजुरबुबा तराई झरेका थिए । उनीहरुले भारतका गल्लीमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । रविको बाल्यकाल पनि अभाव र गरिबीको बीचमा हुर्कियो ।
फाइलन हेर्न काठमाडौँ पुगेकी आमा उमाले निकै दुःख गरेर हुर्काएको छोराले यति सफलता गर्ला भन्ने नलागेको बताउँछन् । रबि २०५४ सालको चैत्र महिनामा जन्मिएका थिए । उनी तेस्रो सन्तान हुन । अछाम छोडेकै रात रविको जन्मिएका थिए । बुढाकोट हाल साँफेबगर नगरपालीकामा पर्दछ ।
लोटस आइ स्कुलमा १२ मा अध्यनरत रवि गीत संगीतबाट प्रभावित थिए । हजुरबुबाले सुदूरपश्चिमको देउडा गीत गाउन सुनेका रवि आफ्नो प्रेरणाको स्रोत त्यही भएको बताउँछन् ।
गीत संगीतप्रतिको बढ्दो लगाभकै कारण धनगढीको केही समयदेखि दोहोरी साँझमा गीत गाउन थाले । ‘पश्चिम सेती दोहोरी साँझ’ तीन महिनासम्म गीत गाए । त्यसपछि उक्त दोहोरी साँझ बन्द नै भयो ।
रविले देउडा, लोक, आधुनिक, पपल सबै गीत गाउँन सक्छन् । नेपाल आइडलको छनोटमा प्रदेश ७ बाट उनी छनोट भएका थिए । धनगढी अडिसनबाट छनोट भएका रवि नेपाल आइडलको उपाधि हात पारेर सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
योसँगै उनी गरिबी र अभावबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । गुजराको लागि गत चुनावमा म्यादी प्रहरी समेत भएका थिए । अहिले पनि रविका परिवार काँचो इट्टा र टायलको घरमा बसिरहेका छन् । अब उनको घरले मुहार परिवर्तन गर्ने अपेक्षा उनको समर्थकहरुले गरेका छन् ।
दैनिक गुजरामा समस्या आएपछि रवि १२ वर्षको कलिलो उमेरमा भारत गएका थिए । तर, काम गर्न नसकेर घर फर्किए । गीत संगीतको क्षेत्रमा अहिले जसरी सफलता प्राप्त गर्दै गए रविको अगाडि त्यो दिन आउने छैन ।
Posted in कला समाचार, कला-संस्कृति, डवली विशेष | Leaveareply